I-WowOW Gooseneck ekhishini ifenisi ene-Pull Out Sprayer
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW Gooseneck Ikhishi ompompi Ngokukhipha Isifutho
I-Chrome Finish Design Patent: umpompi wokudonsela phansi wasekhishini osekupheleni kwe-chrome ecwebezelayo enobuciko obuhle; Umpompi we-goose-neck one-arc esezingeni eliphezulu, yesimanjemanje futhi muhle, uzokwengeza umhlobiso wasendlini wakudala&nobukhazikhazi endlini yakho
I-Muti-Functional Sprayer Head: Iguqulwa kalula isuka emfudlaneni iye ezindleleni zokufafaza, isimpompi sikasinki esine-aerator ye-ABS yokugcwalisa ibhodwe ngokushesha, kulula ukuqedela ukuhlanzwa okusindayo ngokugeleza okuzinzile, futhi kungasindisa amanzi angaphezu kuka-50%, ngokusebenzisa indlela yokuhlunga. ukuqinisekisa izinga lamanzi
I-Pull-Out Sprayer Technology: Ipayipi elingaqhumi elingu-1.7 m elinebhola lamandla adonsela phansi ukuze lihoxise ikhanda lesifutho kahle futhi kalula. Nge-adaptha ejikelezayo evumela i-flex, i-pivot futhi ifinyelele yonke indawo okunzima ukuyithola
I-Deck Plate Yezimbobo Ezi-1 noma Ezi-3: ompompi basekhishini abayisibambo esisodwa beza nepayipi lokuphakela amanzi eli-2 (elishisayo futhi libandayo), ipuleti ledekhi lokufakwa kwezimbobo ezi-1 noma ezi-3, futhi lilingana nezinhlobo ezahlukene zikasinki, asikho isidingo sokukhathazeka ngenkinga yezimbobo ezimbi. 3 izimbobo. Futhi sikunikeza isethi ephelele yokufakwa kwehadiwe
Izinto zokwakha: ingxubevange ye-zinc nomzimba wethusi, i-cartridge ye-ceramic engu-35mm, wonke amakhona namajoyinti avalwe ngokuqinile, aqinisekisa ukuthi akuconsi, akunamthofu nokungagqwali; IWARANTI YEMINYAKA emi-5 kanye Nokwesekwa Kwekhasimende kunikezwa. Imbozwa yimbuyiselo ekhawulelwe yezinsuku ezingama-90.
2311701 imiyalo yokufaka
Umpompi wasekhishini weGooseneck nge-spray down sprayer
Ikhishi lakho ukuziqhenya kwakho futhi ufuna inhlanganisela efanelekayo yokwakhiwa nokusebenza kahle. Namuhla ungazikhetha kumiklamo eminingi yokufenda ekhishini lakho lamaphupho. Kungaba inselelo futhi ukukhetha kuzo zonke izinketho ezisezandleni zakho. Akugcini lapho yonke imishini yasekhishini iza nazo zonke izinhlobo zezimo nosayizi, kodwa futhi akufanele ungawukeli phansi umthelela wezinketho ezehlukene zekhishi lasekhishini. Amakhishi asekhishini ayindawo yokugxila yemvelo kunoma iyiphi ikhishi. Ngaphandle kwalokho, amakhefu ekhishini angenye yamadivayisi asetshenziswa kakhulu ekhishini lakho. Njengoba usebenzisa isikebhe sakho sasekhishini ukulungisa ukudla kwakho, ukugeza izitsha zakho nokuhlanza izandla zakho, usebenzisa le nto yasekhishini izikhathi eziningi ngosuku. Ngakho-ke kungcono uchithe isikhathi esengeziwe ukukhetha ithiphu ekhishini elifanele.
Ompompi basekhishini beza ngezitayela ezahlukahlukene nokusebenza ukuze banikele ngezinhlobo ezahlukahlukene ukulingana zonke izinhlobo zezimfuno. Ngaphandle kwalokho, ompompi basekhishini beza ngemibala ehlukahlukene, osayizi, nezinhlobo. Izinhlobo eziyinhloko zompompi basekhishini ngompompi abadonsa phansi ekhishini, ompompi abakhishwa ekhishini, kanye nompompi basekhishini abaphezulu. Lezi zimpompi zekhishi ezisezingeni eliphakeme zibizwa nangokuthi ompompi basekhishini. Inzuzo enkulu yompompi basekhishini le-gooseneck ukuthi banikezela ngendawo yokusebenzela eningi kunoma yiliphi ikhishi. Ompompi abade bekhishi abaphezulu bakunikeza ukufinyelela okuphelele kusinki wakho wasekhishini. Ngale ndlela, ngeke ube nezinkinga zokufaka izinto ezinkulu, njengebhodwe elikhulu noma ipani, kusinki wakho wasekhishini, nangaphansi kompompi wakho wasekhishini we-gooseneck ephezulu.
Isikhiphi esakhiwe kahle ekhishini se-gooseneck ekhishini
Abaqambi be-WOWOW banikele yonke imizamo yabo ukukunikeza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sebhasikidi esinikeza ukusebenza okuhle futhi. Ngenxa yokwakheka kahle kwayo, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu se-WOWOW sika gooseneck sikusiza ukuba uqede ikhishi lakho ngobuhle. Le ompompi yekhishi ephezulu kakhulu nakanjani izonikeza ukuphakanyiswa kunoma yikuphi ukuklanywa kwekhishi. Ngaphezu kwakho konke, ibuye ibe nokusebenza okuhle nesifutho sayo esididiyelwe sokudonsa phansi.
Le faucet ekhishini ye-nickel go breneck eyaziwa ngokuthi yi-fan-faucet ekhishini, inikeza ukubukeka kwezimboni ngezinto zesimanje nezingaphelelwa isikhathi. Isikhiphi se-gooseneck ekhishini se-WOWOW besingeke siphume endaweni yanoma imuphi umagazini wokwenza izinto onamakhishi wokuqamba okhethekile. Hhayi-ke, le faucet ekhishini ye-gooseneck ingenye yamaphutha aphezulu ekhishini we-WOWOW nokuziqhenya kwalokhu okuhlinzeka ngepulangwe ekhishini lomhlaba jikelele.
Isikhiphi sekhishi se-gooseneck sezinto eziningi ezisebenza kahle
Ngaphandle komklamo, le faucet ekhishini ye-gooseneck yeWOWOW iyisikebhe esisebenza ngemisebenzi eminingi enikela ngezinketho ezimbili zokufafaza. Le faucet yekhishi ephezulu ye-arc ayinikezeli ukusakazwa okujwayelekile ukuze kugcwaliswe amabhodwe namapani ngokwesibonelo. Ngaphezu kwalokho, kufaka imodi yokufafaza ekhululekile yokugeza kalula izitsha zakho nokucwila kwekhishini ukunikela ngemodi yokuhlanza ephakeme. Ungashintsha kalula phakathi kwezinketho ezimbili ngenkinobho ekuzwaneni oluzayo lwesikulufu. Lokho kwenza sikwazi ukushintsha izinketho ngesandla esisodwa ngenkathi u-rins. Ukushintsha imisebenzi ngeke kubangele noma yikuphi ukugqagqana kanye nokuba lula kokushintsha inkinobho kuzokumangaza!
Le faucet ekhishini ye-gooseneck iza ne-hose-inch yokudonsa ukuphuma kwe-intshi enikeza ukukhipha kalula, ngenxa ye-silicon gel nozzle ye-faucet. Ngalesi hose, ungafinyelela kalula zonke izindawo ezinzima ezizungeze ikhishi lakho elisinki. Futhi ngaphezu kwakho konke, i-adaptha ye-swivel eguquguqukayo ikuvumela ukuthi ukwazi ukuhambisa kalula ukunikeza induduzo ephezulu. Imodi elula yokubuyisa le faucen ekhishini ye-gooseneck izolokhu ihola isikulufu selucet libuyele esimweni sayo sokuqala ngemuva kokuqeda ukuhlanza. Ngaphandle kwenkinga!
Isikebhe sokukhishini seGooseneck ngekhwalithi enhle kakhulu
Ipayipi lekhishi le-gooseneck likunikeza ikhwalithi futhi uyaqaphela ukuthi kuzo zonke izici zaleli ompompi lasekhishini eliphakeme kakhulu. Lezi zinsimbi zompompi wekhishi we-gooseneck zingaphezu kwama-70 oz, ngakho-ke uyaqaphela ngokushesha ukuthi unomkhiqizo wensimbi oqinile osusondele. I-WOWOW's cossi-cored gooseneck ompompi inesiphetho esihle kakhulu se-nickel, futhi wonke amalunga avaliwe ngokuqinile ngezinto ezisezingeni eliphakeme. Lokhu kukunikeza isipiliyoni sepompo esingena drip futhi esingenakuvuza. Ngaphandle kwekhwalithi, le ompompi yekhishi le-gooseneck ye-WOWOW nayo kulula ukuyifaka. Umpompi ompompi wasekhishini we-WOWOW udinga nje ukusethwa kwekhishi okuyimigodi engu-1, 2 noma ama-3 futhi, namapayipi amanzi abandayo futhi afudumele. I-escutcheon yensimbi efakiwe ye-1, 2, noma i-3-hole hole-setups, yenza le ompompi yekhishi ihambisane nanoma yiluphi uhlobo lokusetha kwekhishi. Ifana nezinhlobo ezahlukahlukene zamasinki futhi akudingeki ulwe nokunxephezela izikhala noma izimbobo ezimbi. I-WOWOW ikunikeza isethi ephelele yokufaka izinto.
Isikebhe esilinganiselwe esinamandla se-gooseneck ekhishini
Njengoba ikhwalithi yompompi wasekhishini we-WOWOW's gooseneck ingenakuphikiswa, isilinganiso sekhwalithi yamanani yale mpompi yekhishi ephezulu ye-arc yiyona engcono kakhulu oyothola emakethe. Ngoba i-WOWOW isebenzisa kuphela amasu wokukhiqiza amasha ngezinqubo ezizenzakalelayo, singanikeza le ompompi yekhishi le-gooseneck ngentengo ebiza kakhulu. Umpompi wasekhishini uvame ukuba yinto yokugcina ethengwa ekhishini elisanda kwaklanywa. Ngakho-ke ompompi basekhishini imvamisa kuba ukungena kokuvalwa kwesabelomali sekhishi lonke, lapho imingcele yalesi sabelomali ivame ukusondela noma ifinyelelwe khona. Ngakho-ke kuhle ukwazi ukuthi usengathola umpompi wekhishi osezingeni eliphezulu kwisabelomali esilinganiselwe.
Isikebhe sethu sekhishi se-gooseneck sithunyelwa kuwe mahhala, ngakho-ke ngeke ubhekane nezinye izindleko. Okubonayo yilokho okutholayo, futhi lokho kusebenza ngentengo yethu. Ku-WOWOW sinendaba namakhasimende ethu futhi sifuna ukukunikeza ukuthi kungenzeka ube nedizayina ekhishini elingaphezulu kakhulu ngentengo ephansi kakhulu.
Isikulufu sefenisha ekhishini se-gooseneck esithembela kulo!
I-WOWOW iyakholelwa kwimikhiqizo yayo ngakho-ke asesabi ukukunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emihlanu. Ngaphandle kwalokho sikunikeza izinga eliphakeme kakhulu lenkonzo yamakhasimende. Sitholakala ngaso sonke isikhathi ukukuxhasa, noma ngabe ufaka ompompi bekhishi le-gooseneck. Akusizi ngalutho ukuthi uqinisekiswa futhi yinqubomgomo yethu yokubuyisa yezinsuku ezingama-5. Uma ungathandi umkhiqizo nganoma yisiphi isizathu, sizokubuyisela imali ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. Njengoba ukwazi ukubona, kwa-WOWOW siyayithemba imikhiqizo yethu!
Izinzuzo zesikebhe sokudla ekhishini se-gooseneck ngamafuphi:
Umklamo oyingqayizivele wesitayela
Umbhobho wokudonsa ohlanganisiwe
Imisebenzi emibili yokufafaza
Ihlanganisa isitayela nokusebenza okuphezulu
Yenziwe ngezinto zethusi ezisezingeni eliphakeme
I-SKU: 2311701 Categories: Donsela Phansi Oompompi Bekhishi, Ikhishi Faucets Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Donsela Phansi, fafaza
Insimbi Engagqwali / I-Zinc Ingxubevange / Ithusi
Ikhishi / Endlini / Ezohwebo / Indawo yokudlela
Umpompi wasinkini wasekhishini; Amapayipi Amanzi Ashisayo Namakhaza angama-50cm; Donsela phansi isifutho; Plk Plate; Ukukhweza Izesekeli